Nouveau: Iyo nVidia driver (yemahara) inoshanda ne3D | Linux Vakapindwa muropa
Iko kune zvimwe chokwadi nezvegirafu muLinux:
Chii chekudzivirira makadhi kana chipset ATI (kunyangwe rutsigiro rwayo rwave nani).
Izvozvo nVidia ndiyo yakanyanya pane linux
Kuti mutungamiriri wayo wepamutemo ari «zvakavanzika«
Kana tisingade kushandisa madhiraivha eimba, isu tinofanirwa nv.
Iyo nv inongoita chii zvekutanga, haina maficha epamberi kana 3D.
Saka isu takatarisana nedambudziko uye hazvidi kuti uve fan yeFree Software kuti unzwisise kuti kuve nemutyairi wepachena kunopa zvakawanda zvakanaka.
Kunyangwe vanhu vakatoverengera nvIyi kodhi yakanyorwa kupfuura yekodhi yemahara, seyakavanzika kodhi, kodhi iyo kusununguka kunonetsa kuverenga (nVidia yakaita) uye, nekudaro, kugadzirisa.
Kuvandudza ndiro izwi rekutarisa
Chii chinonzi Mahara Software? Kuvandudza, pakati pezvimwe zvinhu, kunzwisisa kuti isu tinopihwa mvumo yekuzviita pasina kutsiva zviri pamutemo. Asi hongu nv haizadzise basa rayo, haishande kuvandudza.
Kufunga nezve izvi iyo X.Org hwaro y rosoftware.org ivo vakatanga kushanda pane mutyairi mutsva muSpanish, iyo yaigona kushanda pamwe nekumhanyisa graphic, kuti vakwanise kushandisa zvinhu zvakaita seCompiz kana mitambo pasina "zvakaipa zvakaipa" zve mutyairi zvakavanzika. Vakamufonera New.
Ivo vachatora kuti ini handina kuyedza, asi zvinonzi zvinoshanda chaizvo paPC dzazvino, kwete pane zvekare kana zvekare zvitsva.
Vanhu veNouveau panguva ino havanyatso kurudzira kuiswa kweiyo mutyairi, asi, zvinoshamisa uye chikonzero nei ndakawana kuvapo kwayo ndekwekuti Fedora 11, iyo inouya muna Chivabvu, haizosanganisi chinhu chakaderera pane by default painotsvaga iyo nVidia komputa isingaenderane nedambudziko makadhi. Zvinotaridza kuti basa nesystem iri rakanakisa zvekuti vanozoiendesawo kuUbuntu 9.04 seimwezve imwe nzira.
Zviripachena ndanga ndichida kuziva kuti uye uye sei izvi zvingaiswe.
Ini ndinojekesa, kuti kunyangwe zvinhu zviri kufamba mushe, mudhara ari kuyedza, ingoshandisa chete kana iwe uine nguva yekutamba.
Iwo iwo iwo mirairo pane yako wiki ye gadza Nouveau pane Debian Ivo akajeka, pasuru yakatogadzirirwa, asi ini ndinofungidzira kuti zvakakosha kushandisa Sid (kuyedza) uye icho chinhu chisiri munhu wese anoda kuita. Iyo pasuru iri izvi.
Isa Nouveau pane Ubuntu
Chinhu chikuru kusunungura mutyairi nvidia-glx kuti muUbuntu kupfuura chero imwe distro inogona kuve iripo pakombuta.
Wobva wawedzera izvo zvekuchengetedza:
Mushure mekuisa ma module:
Pakupedzisira iwe unofanirwa kugadzirisa iyo xorg.conf kugadzirisa izvi:
Uye isu tinofanirwa kutoshanda pamwe new mutyairi.
Isa Nouveau muFedora
Kana iwe usiri kuda kumirira kusvika Chivabvu (izvo zvaizokurudzirwa), mutyairi, senge kunaDebian, ikozvino iripo kunyangwe kushandiswa kwayo kwekuyedza kuchikurudzirwa senge mune ese ma distros nhasi.
Uye inoenderana yeiyo Xorg.conf senguva dzose.
Isa Nouveau pane OpenSuSE
Iyo yekuchengetera iyo ine pasuru yeOpenSuSE yakati rebei, kubva mushanduro 10.3, pfungwa yacho yaizotitungamira kufunga kuti kana iwe ukashandisa dzakakwirira shanduro dziri kushandiswa nhasi, unofarira OpenSuSE Factory mutyairi, asi senge data rese Ivo vari yakura kwazvo, zvingangoita (uye izvi zvinoshanda kune ese ma distros) kuti kune matambudziko nekuti mutyairi ari mudiki.
Kwavari uye vamwe zvinokurudzirwa kushandisa iyo gadza nesosi
Iwe unofanirwa kuve wakangwarira kana uchiisa nekuti 3D kumhanyisa ichiri nyaya yakashata, pamwe muna Chivabvu kwete naFedora, asi mune izvozvi zviripo.
Pane chero munhu angashinga kuzviedza?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Zvimwe Linux » Nouveau: Iyo nVidia driver (yemahara) inoshanda ne3D
Ini munguva pfupi yapfuura ndakaona kuti nv mutyairi akavezwa, izvo zvakasiya vashandisi veNVidia vasina 100% yemahara dzimwe nzira.
Idzo inhau dzakanaka kwazvo, kuti Nouveau yatove kumhara paFedora uye Ubuntu, uye kuti hachisi chinhu chisingashandisike parizvino.
Ndinovimba rimwe zuva tinogona kunyatsotaura kuti muridzi weNVidia mutyairi haachadiwe.
Iwe unorevei uchireva kufemerwa?, Mutyairi akatsamwa?
Pane chero munhu anoziva kana paine mahara mutyairi ane 3D tsigiro yeATI? kana kuti ivo vari kuchikudziridza?
Nouveau, idanho rakakura renharaunda yemahara uye yekupedzisira ive nerusununguko system.
L0rd5had0w, aiwa, yanga isiri jee, ndanga ndichinyatso kubvunza.
@esty Zvinotsanangurwa muchinyorwa zvakadaro
@esty: Ini ndinofunga urikuseka asi kuitira kuti vasazive:
Obfuscated Code ndiyo kodhi iyo, kunyangwe iyo kodhi yekodhi iripo, yakanyatsogadziriswa kuti ivanze mashandiro ayo (ita kuti isanzwisisike). Mune mamwe mazwi, Nvdia yakaburitsa iyo kodhi asi yakazviitira kuti igone kuve nani nekuti haina kunzwisiswa lol zvakanaka ngatitarisirei kuti chirongwa ichi chakanaka uye vanoichiwedzera kune mamwe ma distros ...
@ffuentes: pamwe ndinogona kuzviedza,
Ini ndinogara ndine rimwe dambudziko nevatyairi ve
Iyo nyonganiso iyo Blackberry.
weno… mutyairi wekushandira haandishandire ini nekuda kweiyo kernel vhezheni, uye zvinondiudza kuti ndinofanira kunyora tsanga: '(
Ndine vhidhiyo dzidziso yemabatiro ekuti uzviite sei, asi zvinondipa shusto: D.
saka ndakasunungura 20gb (yangu 160gb hd, ini ndinongoishandisa, hama yangu yaenda, zvichiri zvinosuwisa kudzima zvinhu: '(uye ndine mashanu madvd akasara:' ((((((
saka mune iya gb ndakafunga kuisa muchina wemuchina ... asi ndakazoita "mahara -mt" uye ndine zvishoma pasi pe200mb yegondohwe rakasara risina chakavhurika ... saka nemutyairi uyu pamwe ndinogona kutamba "shin megami tensei fungidzira ", haimo mune cedega runyorwa: '(
waaaaa ndine rombo rakaipa: '(….: D
Yese yakashandiswa yemahara akagovaniswa mabhaudhi akachengetedzwa
- / + buffers / cache: 304 198
Chinjanai: 1906 1 1904
Hwerengedzo: 2409 495 1913
: D uye chete neiyo iceweasel uye kaffeine, terminal uye 2 maforodha: '(
Ndine urombo nekumwe kutaura, ini ndoda kuziviswa mune tsamba yemashoko: D
ps: Ini ndinotora mukana wekugadzirisa iyo yemahara -mt
—-- Yakazara yakashandiswa yemahara akagovaniswa mabhainda akachengetedzwa
Esty, unonzi zita rako Esteban?
Ndakawana kubva papeji rako Oo
uye ndakafunga kuti uri mukadzi OO
uye kuti zita rako was esty Oo
Unoda terminator? OO
esty, hehehe yop Ndakafunga kuti kana iwe uchiziva, asi zviri nani kubvunza pane kugara nekukahadzika lol Salu2 ...
@Byte Corrupt Iyo Linux kernel haina matambudziko nemakadhi aya.
Dambudziko nderekuti hapana vatyairi vemahara, kwavari, ndiko kuti, kuti vashande zvakanaka, unofanirwa kushandisa madhiraivha epamutemo, ayo anoita mushandisi muranda, achimuchengeta ari musungwa wekambani yehardware.
Hapana kudikanwa kweWindows kutsvinya.
«Corrupt Byte; Iwe wave zvekare kushamisika ne "Zvakadaro iwe ucharamba uri muranda werudzi rwemabhizimusi nemakambani anogadzira Hardware"
Asi hei iwe unofunga sezvaunoda, asi ini handifunge kuti mumwe munhu anoshandisa Opera neWindows Vista ane hanya nerusununguko rwavo.
Kana Linux iine matambudziko neNvidia uye ATi, iwo anenge makumi mana muzana emakomputa.
Dambudziko rakakomba, handiti?
Ah ndine hurombo, ndanga ndichida kuve nyore.
Ini ndaida kureva kuti vashandisi vanoshandisa komputa vachishandisa Linux kernel kugovera vane mashandiro kana hunyanzvi matambudziko kana vachishandisa kugona kweimwe Hardware yakagadzirwa neNvidia kana AMD, iri rinenge 40% yemakomputa ako epasirese.
Iri idambudziko rakakomba, handiti?
Uye sekutaura kwechinyorwa, hazvisi chete zvinodikanwa zvemahara madhiraivha, asi chaiyo magwaro ezvinyorwa zvehardware kuitira kuti vashande 100%. Kunyangwe zvakadaro, iwe ucharamba uri muranda wenzanga yemabhizimusi nemakambani anogadzira Hardware.
Ini ndakasununguka senge iwe (kunze kwekunge uchigara kuNorth Korea). Ndakaita sarudzo yekushandisa Windows nekuti inosangana nezvandinoda, zvisina kugoverwa kweLinux. Ndafunga kushandisa Opera nekuti ndinofunga ndeye yakanakisa bhurawuza, hazvina basa kana ndisingakwanise kuona kana kugadzirisa kodhi yayo yekodhi, nekuti ini ndinonyanya kufarira maficha ebhurawuza.
Uye ini handina basa kana ndichigona kuona kana kugadzirisa madhiraivha andinoshandisa, nekuti ini handina izvo zvandinoda. Izvo zvinongoshanda.
MuLinux mumwe anokwanisa kusarudza kugadzirisa kugovera kuti zvishande nemazvo, asi vashandisi havadi kuita sarudzo iyoyo, ivo vanongoda kuti kugoverwa kushande nemazvo, semunhu anonzwika, chiri chikamu chechinangwa che yega software, ndeimwe yemitemo yekushandisa.
Kune vazhinji vashandisi, kushandiswa kunonyanya kukosha kupfuura "rusununguko" rwakakurudzirwa neGNU.
Ini ndichaera, sezvo yemahara software mushandisi inogara iyo NV, ndinoda kuona iyo «mhedzisiro» ...
mahwindo angu 7 anondimanikidza kunhonga donje mumunda. :(
@Byte Corrupt: Ndanzwa mutsara unozivikanwa pamberi "Ndasarudza Windows", kunyepa, hapana mushandisi weWindows akaisarudza, vanoishandisa nekuti ndizvo zvazviri.
Rusununguko rwekushandura kodhi yekodhi, hazvidi kuti munhu arishandise zvakananga, zvakafanana nerusununguko rwevatapi venhau, uye zvino vava kuzondiudza kuti vese vatori venhau: -
Iye zvino hauna kunetseka nezve technical chikamu kana? Ipapo chinhu chako chinotonyanya kukomba. Mahwindo ekumashure mahwindo akakura, ruzivo runopinda nekubuda kwese kwese iwe usingaone. Zvino iwe uchiri kurodha pc yako, nechirongwa chekutiza senge antivirus, mune maGNU / Linux mavairasi haatombovapo, uye ndinoti zvirinani, nekuti zvirevo kuti pane mamwe, asi ini ndoda kuti undizivise kune mumwe munhu ane utapukire komputa uchishandisa GNU / LInux (Usati wati izvi ndezvekuti pane vashoma vashandisi, ini ndinojekesa izvo zvinobatsira, asi zvinobatsirawo kuti iwe usave nemabugs akawanda seWindows).
Pamwe dai Windows yaive nani zvehunyanzvi, iwe waigona kunzwisisa kuti vanhu vaidzivirira, kunyangwe kushambadzira kwayo kuri kweunzenza.
Zvino chimwe chinhu chinondinetsa ndechekuti vazhinji vevaya vanodzivirira Windows, uye ini handisi kuti ndiyo kesi yako, vane kopi isingabvumirwe yacho. Vanodzivirira zvisinganzwisisike.
Kunyangwe vangangopokana nevashandisi veWindows, software yekudyara haina hunhu, kuisa zvinomira zvisingakwanise kutevedzera mukuita.
Kupfuura iyo w
@ N @ ty ¿? Blackberry? Ein? Unorevei? Handinzwisise…
Vhoti yangu yeakanakisa komendi:
xDDD (ehe, zvakaratidzika kwandiri kuti anga akatsamwa neni ...)
Kune rangu divi, ndinofara neNouveau uye ini ndinofarira iyo desktop ine Nice kumashure uye HAPANA mhedzisiro, yakapusa :)
Omar, ini ndinoshandisa Windows, uye ini ndinoshandisa iyo kubiwa, chii chimwe, ini ndinoshandisa iyo Ue, saka pamusoro peiyo yakabiwa, yakarongedzwa.
Uye ini ndinodzivirira Windows nekuti inondishandira, uye inoshandira 90% yenyika.
Uye nekuti ini ndakabira?, Enda ku:
Uye kuchidzivirira sekunge raive dare, zvakanaka ... vamwe vedu pirated software, mamwe mafirimu, mamwe ma mp3s ... pane zvese zviri mumunda wemizambiringa waIshe. Ndiwo musoro wenyaya watotaurwa nezvazvo.
@Omar: Ini ndinojekesa kutanga kwese kuti ndiri kushandisa Windows xq mune rangu basa Vanondimanikidza ... lol lol ndinofunga urikunyura mugirazi remvura zvakataurwa na byte ichokwadi uye ingori maonero ake, iwe unofanirwa kudzidza kuremekedza zvinofungwa nevamwe ndosaka paine kutaura kwepachena kwekufunga uye kusingaite hondo iri nani ese OS ane zvayakanakira nezvayakaipira. Izvo hazvina basa kuti uvhare mufilosofi pasina kupa mukana kune ongororo yezvinotaurwa nevamwe ... ndanga ndiri mushandisi weLinux kwegore nehafu, ndinofara nazvo kwandiri ndizvo zvakanakisa zvinogona kuitika ini asi ini handione chero chinhu chakanaka mukuisa kurwisa pane nyaya dzakadai, ndinokusiira chinongedzo kubva kubarrapunto kuti uverenge chimwe chinhu chinofungwa naStallmal http://softlibre.barrapunto.com/softlibre/09/03/05/0818255.shtml
Haisi Spam ini ndinofungidzira ivo hehehe Salu2 kune vese ...
weno… ndakaiverenga ndikanyora zvakare
«Vazhinji veavo vanodzivirira windows vanoshandisa pirated kopi yakaiswa, zvirongwa zvine kutsemuka uye mageniki» saka ivo vanodzivirira zvisinganzwisisike
kana iwe uchida kudzivirira chimwe chinhu, chiite zvakakomba "sekunge iwe uri mudare" "NEZVO ZVEMutemo
weno, neizvozvo ini handirwisane nemunhu, ini ndinongo nyora nemurazvo
Ichokwadi ndechekuti mazuva mashoma apfuura ini ndakaisa debian, uye inoshanda zvirinani pane Ubuntu, chokwadi ...
zuva iro ubuntu rinoita zvakafanana uye rinoshanda zvakafanana nedeebian, richaramba richishandisa debian, kunze kwekunge pasisina mamwe manyorerwo ezve debian, nekuti mu ubuntu "rakagadzirira", nekuti zuva irori ndinganyadziswe uye handidi kuziva zvekuita ...
Zvingadai zvakatosiyana dai ndisati ndatanga kushandisa debian ubuntu ini ndanga ndatoita zvese uyezve zvinoita debian .. ipapo zvinogona kunge zvakasiyana
Ini handipe zvakanyanya kuti mumwe munhu "anozviti" uye ndinonzwisisa mumwe munhu anonzwa nenzira imwechete nezve windows (kunyangwe ndichizviita kuti ndidzidze, uye uyu aizozviita kwete kuti adzidze, chake / chinhu chake)
Chandinofarira ndechekuti vanhu vanoziva kuti "handicho chinhu chega" uye kana vachiziva uye vasingade icho, havagone kumanikidzwa, semunhu anoda kurara muchando panzvimbo pemubhedha nekuti ivo havana rongedza mubhedha (ini handigadzike mubhedha uye ndiraremo: D)
weno kupera kwemurazvo izvozvi ndichagadzirisa kuti ndione kana ndichikwanisa kushandisa madhiraivha eimba sezvo ini ndichishandisa kadhi mazana matanhatu nemakumi matanhatu uye haisi pakati pevaNouveau
PS: Ini ndinoshandisa Opera nekuti ne iceweasel ini ndinobuda kunze kwegondohwe randinaro uye rinoramba richishandisa swap ... rinononoka uye harivhure mafomu, mimhanzi inonamira ...
zviri kunze kwekukosha :(
Zvakanaka, vakuru vanoita makopi asina kutenderwa eWindows, hava "hack", nekuti vapambi vanoshandisa ngarava nezvombo, kwete ma cd kopi.
Izwi rekuti pirate rakagadzirwa nemakambani epamhepo software uye zvinyorwa zvemarekodhi, kutiita kuti titende kuti kutevedzera zvigadzirwa zvavo hakuna kunaka. Hapana kana mumwe wevaya vanoteedzera Windows vapambi.
Asi kutyora chibvumirano cherezinesi hakuna kumbobvira kwakanaka, kunyangwe chibvumirano chiri kushungurudza.
Izvo zvavanowana kubva mukuteedzera Windows kuve nekopi isingatenderwe yeWindows yakaiswa, izvo zvakatonyanya kushata sekuve nekopi yakabvumidzwa yeWindows.
Iyo chete nzira yekusatyora chibvumirano, uye kusawira mutsika nemitemo inonetsa, hakusi kushandisa software inoisa izvo zvisingatsungiririki mamiriro. Nekuti makopi asina mvumo aripo, nekuti mamiriro akadaro haagone kutsigirwa muchokwadi.
Windows yakabvumidza kana kwete, vashori kune vashandisi vayo, vanotumira mishumo kunzvimbo dzinoshamisa kwazvo, uye zvisinei nekuti "yakatarwa" sei, "madhoo ekumashure" eWindows achiripo.
Ikopi yemumhanzi yekushandisa pachivande zviri pamutemo chose, ndinoitumidza zita nekuti mumwe munhu akafananidza kopi yesoftware nekopi yemumhanzi, zvakare mimhanzi haitumire meseji chero ini ndisingazive, uye haina kudzora komputa yangu.
Chibvumirano cherezinesi chinogona kutyorwa, zviri pachena, asi nezvazvo zvese zvaunoita kuva nechigadzirwa chisina kutsigirwa, chisina mvumo chakazara nemavirusi (zvisinei nekuti vanoshandisa antivirus yakawanda sei).
Mvumo kana kwete, kana chimwe chinhu chikatyora kana ivo vachida chimwe chinhu chitsva, havagone kukumbira Microsoft kuti igadzirise kana kuiwedzera muforamu kana pane runyorwa rwekutumira, ivo vanongofanirwa kugadzirisa izvo zvavanazvo.
NeSoftware Yemahara, kana ndine dambudziko ndinotumira meseji uye nharaunda kana vanogadzira vanondipindura vozvigadzirisa, uye pamusoro pezvese hapana chavanondibhadharisa.
Saka kwandiri ini nyaya yakavharwa, kana iwe uchida kuramba uchikurukura, ita saizvozvo.
Yakanga iri mhosho kwandiri kuti nditange hurukuro inehasha yakadaro, ndinoibvuma, nekuti vanoverengeka vakaitumidza.
Zvakanaka, chokwadi ndechekuti, ini zvakare ndine windows
Kusvikira yagadziriswa, inotaridzika yakafanana neiyo win7 (ine chidzitiro chekumba)
asi zvinosuwisa kuti iriko ... uye handikwanise kuishandisa xDDDDD
pq yakundikana uye kunyangwe ndikateedzera sei faira rakakanganiswa harishande, chinhu chakaipisisa ndechekuti iyo partition iri 64 GB saka yakawanda kusunungura: D
ndinotenda mwari nekutadza mhepo, nekuti nenzira iyoyo handifanire kuishandisa, kunyangwe ndiri kuzoiisa zvakadaro, kutamba mutambo wepamhepo wandifadza
Chokwadi ndechekuti chinondinetsa nharo "kana ndichida kushandisa zvakavanzika software ndinoishandisa nekuti hapana munhu anondimanikidza ku" uye nemhando idzi dzekupokana, kana muchokwadi nharo iri iyo yemubhedha nehoyo, kunze tsika
Ini ndinoshandisa chigero kusamisa mubhedha, kunyaradza
Ini ndinoshandisa mubhedha nekuti zvikasadaro musana wangu unorwadza, kunyaradzwa: D
Ndinonzwa ndakasununguka, uye ini handizive chero mutauro, pachokwadi ini handikwanise kuita zvinopfuura hello world! muna perl (pamwe kopi / namatidza)
Ini ndinobva kuChile porsiacaso, uye kupfuura chero chinhu chandinotsigira uyu mutsara wawakaisa muiyi link:
"Pano pirated muchidimbu nekuti vanhu havatozive kuti Windows inobhadharwa mune dzimwe nguva"
vanhu vachigura vachiziva kuti varikuita chimwe chinhu chisiri pamutemo, vachiziva kuti (semuenzaniso) Microsoft yakatenga DOS, Mosaic (kubva IE yaive yakavakirwa) hotmail, nezvimwe zvinhu zvakawanda zvine tsvina tsvina, semuenzaniso avo vakatenga mosaic vakavimbisa Peresenti yeIE kutengesa , ipapo yaisanganisira yemahara IE, iwo Mutauro wekutanga hauna kugadzirwa nemutemo, Microsoft nemaune inogadzira hofisi nemahwindo zvisingawirirane painoburitsa vhezheni nyowani, iyo inokweretesa nyika nemipiro yekushandisa software yayo:
pano yakawanda yayo «nhoroondo»
kuti vanhu vanoziva kuti kune dzimwe nzira uye sezvo omar achiti usashandise nekuti ndizvo zviripo, kana nekuti havazive zvakawanda, uye kuti vanoziva zvakanaka, dambudziko nderekuti vanhu havadi kuziva.
ikozvino kana iwe ukashandisa win dps yeizvozvo zvese, zvakanaka ini handina basa nazvo, kupfuura zvakaipa, huzivi hwangu ndehwekuti denga negehena hazvipo, mumwe anosara aine mhosva yake, usaudza mumwe munhu mhosva, nekuti unosununguka iwe pachako kubva kuzvinhu zvaunofanira kubhadhara, ndosaka vasingazive vachienda kudenga, ini ndoda kuve mutongi wedhiabhorosi, uye kuve nechokwadi chekuti hapana vasingazive, ndiyo chete nzira yekuita nyika iri nani, kuita kuti vanhu vanzwe vane mhosva , kana zvisiri saka enda kugehena!
PS. kukanganisa kunoitwa nevamwe kune vamwe
Kune vamwe vanhu windows zviri nani kupfuura linux. Kwete kune vamwe. Uye izvo zvinoremekedzwa, ini ndinofunga iwo musoro wakanaka unodzokorodza muLXA! Kunyangwe kune vamwe, Windows iri chaizvo imwe nzira yeLinux.
Omar, peji rako haritakure: D
Ndakagara ndichiona zvichisekesa kana vanhu vasingasvike ngarava kana vane makumbo emapango vachidaidzwa kuti vapambi, asi vachidaidza chinhu chisiri gonzo uye chisingadyi chizi mbeva.
Hehe dai ndanga ndarasa WordPress mune kero
Ini ndinokumbira ruregerero kwauri, ndiani wandakatangisa nechikepe neakanyanya ;-)
Hapana dambudziko, ndinoda gakava;)
Pamusoroi mubvunzo wangu, asi ... Chikonzero chipi icho nVidia angave nacho chekusavandudza mutyairi wavo?
Nekuti kana ndiro rikashanda zvirinani, vanhu vanoda kutenga ndiro nekuti yafamba zvakanaka
Pindura kune tuxlovers
Chaizvoizvo pasi pemafungiro edu zvingave zvakanaka, asi makambani aya haasi anodzivirira emahara software, iwo chete makambani anomanikidzwa kuve nemadriver eLinux uye vanofunga kuti kuapa kunharaunda kunogona kukuvadza bhizinesi. Dambudziko harisi rekuti nVidia haidi kubatsira Linux, dambudziko nderekuti vane zvavanokoshesa uye zvavanokoshesa iWindows.
fsource ndizvo chaizvo, Windows ndiyo yavanokoshesa, kudzamara chikamu chemusika weLinux chichiwedzera, Nvidia haichapa kukosha kwakanyanya. Kunyangwe ndichiziva kuti Nvidia inotsigira masainzi masisitimu anoshandisa Nvidia kumabasa avo.
Dambudziko hombe kushomeka kwematanho, Nvidia anogona kugadzira mutyairi anoshanda mumarabhoritari avo, asi vanozozviidza kupi? PaDebian, Ubuntu, Slakware, Fedora, Arch, Gentoo? Ndeipi vhezheni yekernel? Ndeipi vhezheni ye glibc uye gcc?. Kunyangwe kana mushanduro N yeiyo kernel mutyairi achishanda, unoita sei kuti uve nechokwadi chekuti vhezheni N + 1 haimiriri?
hapana Cove haishande XD
Pindura kuna rodri
@esty, kuverenga aya ekare makomendi ini ndinoona kuti iwe unodzivirira windows nekuisa iyi link (http://alt-tab.com.ar/share-de-windows-piratas/). Iwe unoda kutsanangura kuti nei chinyorwa ichi chatanga seichi?: «Mazuva mashoma apfuura Ballmer akataura kuti kuMicrosoft Linux mukwikwidzi mukuru pane Apple»
Iyo gava iyo Microsoft inoda kuita kuti inyangarike